Faah faahin:- Qarax aad u xoogan oo maanta ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba ee Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax aad u xoogan oo maanta ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba ee Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax aad u xoogan oo maanta lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad-sugidda iyo sirdoonka Qaranka, kaas oo ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho.
Waxaa inta la xaqiijiyay qaraxaasi ku geeriyooday mid ka mid ah ciidankii saarnaa gaariga oo magaciisa lagu sheegay Axmed Shuuriye, waxaana sidoo kale ku dhaawacantay 3 qof kale uu mid ka mid ah yahay askari saarnaa gaariga.
Dad goob-joogayaal oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in qaraxa gaariga uu dhacay xilli uu shidaal ka qaadanayay agagaarka isgoyska Jubba, waxaana gaariga qarxay la sheegay inuu ahaa nooca raaxada ah.
Ciidanka nabad-sugidda ee NISA oo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa baaritaano ka sameeyay halkaasi, mana jirin cid ilaa iyo haatan ay kusoo qab-qabteen baaritaanadaas.
Ugu dambeyntii, qaraxaan ayaa kusoo beegmayaa xilli seddax maalmood kahor qarax ismiidaamin ah lagu dilay Allaha u naxariistee Jeneraal Maxamed Jimcaale Rooble oo loo yaqaanay Jeneraal Goobaale, kaas oo ka tirsanaa taliyeyaasha guutadda seddaxaad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed.